Home Wararka Qaar kamida Musharaxiinta oo durbadiiba bilaabay in sheegtaan in wadamo shisheeye maalgalinayaan
Qaar kamida Musharaxiinta oo durbadiiba bilaabay in sheegtaan in wadamo shisheeye maalgalinayaan
Iyada oo in ka yar 24 saac ay ka soo wareegatay xiligii la saxiixay heshiiskii qorshaha doorashada ayaad urbadiiba qaar kamida Musharaxiinta waxa ay bilaabeen in aan faafiyaan warar been abuur ah oo la doonayo in lagu kasbado Xildhibaanada la soo dooran doono.
Cabdikarin Xuseen Guuleed oo kamida Musharaxiintaas ayaa bilaabay in uu suuqa gashado war aan raad ka haynin uu ku sheeganayo in dowlada Qatar ay isaga wadato, lacag aan caadi ahayna siin doonto.
Cabdikarim oo ah shaqsi aan ka xishoon beenta ayaa hadalkaas u sheegay saaxibadiisa gaarka ah si ay u faafiyaan beentaas.
Waxa iyagana sidoo kale bilaabay in war noocaas oo kale suuqa gashadaan Shiikh Sharif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay Sheeganaya an in dowlad imaaraadka ay lacag siin doonto, halka Dahir Geele uu isaga ku dhaaranayo in Dowlada Sacuudiga lacag xoog leg jeebka u galin doonto.
Xaqiiqdii waa wax laga xishoodo ah in lagu faano in Musharaxiinta qaarkood ay sheegtaan in ay lacag laaluush ka soo qadanayaan dalal shisheeye si ay ugu iibsadaan kuraasta xildhibaanadda.